Tsanangudzo:IPhone 7 Li-ion Battery,IPhone 7 Battery Original,IPhone 7 Battery IOS
Itsva 0 cycle iPhone 7 Replacement Li-ion Battery yakatsigirwa iOS 11.4 update
Iyi iPhone 7 Li-ion Battery inowirirana nemhando dze iPhone 7 Battery ne 32GB / 128GB chete, kwete 7 Plus. Brand All Brand New iPhone 7 Battery Replacement inoedzwa neunyanzvi tester pasi pehutano hwehutano hwekutonga, kuburikidza ne FCC, CE uye RoHS yakavimbiswa. 100% 0 purogiramu isati yakagadziridzwa nguva nguva nemichina. Ichi ndicho chinhu chokutanga chamunofanira kuziva pamusoro pe iPhone 7 Battery Upenyu hwekutanga: iPhones hazvienzanisisi mabheti eupenyu hwavo mumakore asi mumitambo. A charge cycle ndeipi yakareba sei bhateri yako inotora kusvika 100%. Iwe unogona kuripa chikwereti kubva pa40% kusvika ku100%, zvichireva kuti iwe uri 60% kuburikidza nepurogiramu. Kunyangwe mushure mokuraira yako unit, iwe unoda kushandisa 40% zvakare kuti upedze marangiro epakutanga. Iwe unogona kushandisa imwe yakakwana yepurogiramu mune rimwe zuva, kana kupfuura mazuva mashomanana zvichienderana nekushandiswa.Iyo yakareba kwenguva yakareba sei? Unoshandisa maawa mangani pazuva? Uye kakawanda unoribhadhara? Ndicho chikonzero hupenyu hwemazuva ose hunowanzotariswa mumitambo yekuita.
Nzira yekutonga iPhone iPhone Battery inguva yekuguma kwehupenyu hwebheteri uye inofanira kushandura bhateri itsva? apo iPhone Battery inofanira kutengesa kaviri pazuva pazuva rehupenyu hwezuva nezuva, uye inotora nguva yakareba kupfuura yekare. Zvichida kutora bhatiri itsva kana usingadi kuchinja itsva foni.Kuzvarwa iPhone 7 Li-ion Battery kusina kupfuura 4 maawa nenguva. Apple yakayemura Older iPhone mifananidzo inogona kuenderera mberi nokuda kwekukwegura mabheti. New iPhone 7 Battery Nguva yekutanga yekutengesa haisi nguva chete asiwo iPhone 7 Battery iOS Support 11.4 yakarongwa. Chikamu chimwe nechimwe cheNew iPhone 7 Li-ion Battery dzakapfuura CE, ROHS, MSDS, UN38.3, asiwo yakapfuura zvinhu zvinopfuura 30 kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwebasa vasati vashamba. Stable Quality, Directly Factory Price, After-sale Service Ganranteed, Online Service Available, Iva wakatendeseka iPhone lithium-ion bateri mupi wechinangwa!
IPhone 7 Li-ion Battery IPhone 7 Battery Original IPhone 7 Battery IOS IPhone 8 Li-ion Battery IPhone 5C Li-ion Battery iPhone 8 Li-ion Battery IPhone 7 Plus Li-ion Battery New IPhone 8 Li-ion Battery